Jamhuuriyadda Somaliland SIYAASADDA QARANKA EE DHALLINYARADA (2018) – Wasaarada Dhalanyarada Ciyaaraha Somaliland
Somaliland oo ka mid ah waddamada dunida ugu da’ yar waxaa horyaala hawlo aad u culus oo dhinaca horumarka ah. Maadaaama aanay cid kale inoo qabanayn hawshaa waa in aynnu innagu u soo jeensannaa horumarka waddankeenna.
Maanta caqabado waaweyn ayaa horyaala dhallinyaradeena kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqo la’aan, waxbarasho xumo iyo tahriib.
Waxaa la soo gaadhay wakhtigii aynnu isbeddel samayn lahayn. Siyaasadda Qaranka ee Dhallinyarada (2018-2021) waxay hormood ka tahay in isbeddeladaa lagu dhaqaaqo si dhallinyarada loogu jiheeyo dhinaca horumarka mustaqbalka. Siyaasaddan ujeeddadeedu waa in sare loo qaado nolosha iyo garaadka dhallinyarada looguna carbbiyo inay noqdaan hoggaamiyayaal xilkas ah.
Nuxur ahaan, siyaasaddu waa waddadii ay dhallinyaradu ku kobcin lahaayeen aqoontooda iyo xirfadahooda si ay u higsadaan nolol wanaagsan.
Waa lagama maarmaan in daneenayaasha oo dhammi iskaashadaan si ay dhallinyaradu u helaan adeegyada ay u baahan yihiin una awoodaan inay sare u qaadaan tayada noloshooda.
Waxaa dhammaan muwaadiniinta lagu dhiirigelinyaa inay ka qayb-qaataan hawlaha ku saabsan horumarinta dhallinyarada.
Kormeer Masuuliyiinta Wasaaradu ku Sameeyeen Gobolada Togdheer iyo Saraar →
13th March 2015 wdhc Comments Off on Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada fiyo Ciyaaraha oo Kulamo la Yeeshay Dhigiisa Dalka Djibouti iyo Madaxda Olombikada Djiboiti